Show ကို 2019 ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ကို Global သတင်းရင်းမြစ်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်မှာတင်ဆက်ဖို့ koowheel
အချိန် post: မတ်လ-14-2019
: koowheel, Short-အကွာအဝေးနယ်လှည့်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ဟောင်ကောင်ကို Global သတင်းရင်းမြစ် Consumer Electronics Show, ဧပြီ 11- 14 ကနေဟောင်ကောင်တွင်ကျင်းပကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲတ 2019. koowheel တဲမှာတင်ဆက်မယ့် 2F36 ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: မတ်လ-21-2018
အချိန် post: မတ်လ-02-2018
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-28-2018
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-06-2018
အတော်များများအွန်လိုင်းစတိုးတခါပိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိဆိုင်ကယ်နှင့် hoverboards ရာပူဇော်သက္ကာကိုစတင်ခဲ့ပါပြီ။ အသံတိတ်စကူတာကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်း, ချုပ်အရည်အသွေးကို Avenue-ဥပဒေရေးရာဆောင်တတ်၏, ထို Koowheel အစိမ်းရောင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဥရောပသို့တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါလက်သို့မဟုတ်ခွကေို-operated ဘရိတ်မပါဘဲချက်ချင်း Scooter ကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုထား ...ဆက်ဖတ်ရန် »
In order to reduce any type of risk, we recommend you carefully heed the following warnings. Use KOOWHEEL Electric Longboard sensibly and responsibly. KOOWHEEL Electric Skateboard isahi-ech transport vehicle, but its incorrect and inappropriate use can cause injuries. Always wear shoes,ahel...ဆက်ဖတ်ရန် »
KOOWHEEL လျှပ်စစ် Longboard ကို Maintenance နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
CLEANING Always close the power port before cleaning. Always disconnect KOOWHEEL Electric Longboard from the charger before cleaning it. Do not use thinners or other solvents to clean since they could damage surfaces. Useadamp cloth to clean plastic parts. Do not wash KOOWHEEL LONGBOARD with ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-22-2017
လူတွေဖြစ်ပါတယ်မေးဖို့ရာတစ်ဦးကဘုံမေးခွန်းဆိုင်ကယ်နှင့်စကိတ်စီးခမောက်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အမှန်တကယ် function ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်အပြင်ရူပအတွက်သိသာခြားနားချက်ကနေ "အဘယျနညျးတစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နှင့်စကိတ်စီးသံခမောက်လုံးအကြားခြားနားချက်ရဲ့" သင်လျှင်သေချာအောင်ချင်ပါတယ် ri အဘို့အဦးထုပ်၏ညာဘက် type ကိုမဝယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-30-2017
Koowheel 2nd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများလျှပ်စစ်စကိတ်စီးညွှန်ကြားချက်များ
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-29-2017
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-03-2017
အချိန် post: အောက်တိုဘာ-27-2017
အဆိုပါ Koowheel E1,2ဘီးလက်တန်း foldable ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းလျှပ်စစ် Scooter ဖွယ်ရှိကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Transporter အော်တိုဖြောင့်မတ်အသေးဆုံးနှင့်ပျော့အလေးချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Koowheel မူပိုင်ခွင့်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်အေးမြဒီဇိုင်း, headlamps အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးအမြီးမီးခွက်ဖြစ်၏ တစ်ဦးနဲ့ LED ဃရှိပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: အောက်တိုဘာ-05-2017
Koowheel hoverboard K7 နှင့်အတူဘဝခုနှစ်တွင်အသစ် Start ကို Make
Post ကိုအချိန်: Sep-12-2017
ထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, ငါအမှတ်တံဆိပ် Koowheel သစ်ကို K7 ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာနှင့်အတူဤအခိုင်အမာအတည်ပြုရန်လိမ့်မည်။ လမ်းကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာချွတ်အဆိုပါ KOOWHEEL K7 hoverboard 8.5inch hoverboard ကြီးတွေဘီးဆက်ဆက် ul cer လာတစ်ခုတည်းကိုသာလက်တဆုပ်စာအနည်းဖက်ရှင်တွေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတွက်တဦးတည်းအတွက်အကြားစဉ်းစားသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: Sep-05-2017
ပေမယ့်, ထူးမြတ်သောအရောင်အနညျးလမျးတစျခုအလားအလာမဆိုထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုကိုပယ်ရန်ကာစစ်မှန်သောနှင့်စနစ်တကျ-ကြည်ကြည်ရောင်းချသူထံမှမဝယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနည်းလမ်းကသင့်ချဉ်းကပ်မှုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်နှင့်လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်ကြောမှပတ်သတ်ပြီးအများကြီးစိတ်ပူရန်မလိုပါ။ Powerboard`s ဘက်ထရီအားဖြင့်2ဘီးထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-23-2017
KOOWHEEL hoverboard K8 ၏စျေးကွက်အားသာချက်များနှင့်အလားအလာ
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-15-2017
1. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိ Scooter 2. ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ status ကိုချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီး၏စျေးကွက်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် 3. K8 စျေးကွက်အားသာချက်များနှင့်အလားအလာများစားသုံးမှု၏အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်တကွ, စွမ်းအင်သစ်ယာဉ်များ - ချိန်ခွင်လျှာကားများက၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစားသုံးသူချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »